बिस्का जात्रामा रथ तान्न नदिने प्रशासनको अडानविरुद्ध स्थानीय
सन्दीपले दिलाए नेपाललाई पहिलो सफलता
माधव नेपाल पक्षले छुट्टै दल गठन गरेको ओलीको आरोप
ह्याक भयो डोमिनोका १० लाख उपभोक्ताको क्रेडिट कार्ड विवरण
कुशल र दीपेन्द्रको अर्धशतकमा नेपालले दियो नेदरल्यान्ड्सलाई २०७ रनको लक्ष्य
कोभिडका कारण अन्य सेवा प्रभावित नगर्न मन्त्रालयको निर्देशन
कर्णालीमा सांसद् भड्काएको आरोप लगाउँदै ओलीले नेपाललाई सोधे– दल त्याग गरेको किन नभन्ने ?
काठमाडौं । बिस्का जात्रामा रथ तान्न नदिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको अडानविरुद्ध भक्तपुरबासी एकजुट भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रशासनको एकलौटी निर्णयले बिस्का जात्रा मनाउन रोक लगाएको भन्दै आन्दोलित भएको स्थानीय प्रमेलाल शिल्पकारले बताए ।
उनले नेताले भेला, समारोह गर्न हुने तर स्थानीयले जात्रा मनाउन नहुने भन्दै सरकारले जात्रामा हस्तक्षेप गरेको बताए । भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा आइतबार बसेको बैठकले जात्रामा रथ तान्न नमिल्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘‘सरकार आफैं कोरोना महामारीको वास्तै नगरी सभा समारोह गरिरहेको छ । हामी स्थानीयले जात्रा मनाउन नपाउने ? हामी स्थानीय एकजुट छाैँ” उनले भने, ‘‘रथ बनाउन फागुन २१ गतेदेखि थालिएको थियो । गत वर्ष पनि कोरोना महामारी कै कारण रथजात्रा मनाउन पाएनौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले स्थानीयको परामर्श विना एकलौटी निर्णय गरेकोमा हाम्रो आपत्ति छ ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बैठकमा प्रहरी, महानगर प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना र राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि सहभागी भएको र जात्रामा स्थानीयलाई सहभागी नगराइ निर्णय गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
शिल्पकार रथको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताउँछन् । रथको छाना हाल्न मात्रै बाँकी छ ।
सम्पदा संरक्षण अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ रथ नबनाउँदै प्रशासनले निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी मेलम्ची खानेपानी काठमाडौं आएको उपलक्ष्यमा सरकारले दुई पटक गरेको समारोहलाई उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘‘सरकारले आफ्नो कार्यक्रम गर्दा भने कोरोनाको ख्याल नगर्ने हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउन जात्रापर्व गर्न नपाउने ? कोरोना महामारी सामान्य भएको बेलामा जात्रा पर्व संस्कृतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग छ,” उनको माग छ ।
गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण रथयात्रा मनाउन नपाएको भन्दै यसपालिको रथयात्रा मनाउने निर्णय गरेको थियो । सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा वैशाख ७ गतेदेखि सुरु हुनेछ ।
राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संघर्ष संयुक्त समिति काठमाडौंले बिस्का जात्रामा रथयात्रा मनाइनुपर्ने भन्दै स्थानीयको समर्थनमा विज्ञप्ति निकालेको थियो ।
बिस्का जात्राको रथ तान्ने काम चैत २८ गतेदेखि सुरु हुन्छ । आठ रात नौ दिनको जात्रा अन्तर्गत रथ तान्ने जिब्रो छेड्ने लगायतका विभिन्न कार्यक्रम हुन्छन् । यसलाई लिङ्गो ठड्याउने र ढाल्ने मूल परम्पराका रुपमा पनि हेरिन्छ ।
भक्तपुरका स्थानीयले आज दिउसो रथ तान्न पाउँनुपर्ने माग राख्दै विरोध गरे । अहिले साँझ भक्तपुरको न्यातपोल मन्दिरमा आन्दोलन गरेका छन् ।
जति आन्दोलन गरे पनि रथ तान्न नदिने प्रशासनको अडान
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जति आन्दोलन भएपनि रथ तान्न नदिने अडान लिने जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केशरीले रथ तान्दा भीडभाड धेरै हुने भएकाले रथजात्रा मनाउन नदिने बताए । उनले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पूजापाठ भगवानको काम गर्न स्थानीयलाई नरोकेको बताए । ‘‘हामीले गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार रथ तान्न नदिने निर्णय गरेका हौँ । रथ तान्दा स्थानीयको मात्रै सहभागिता नभइ विभिन्न जिल्लाका मानिस भेला हुने भएकाले रथ तान्न रोकौँ भनेको थियौँ,” उनले भने ।
दोस्रो डोज खोप : आज छुटेकाले ११ गतेसम्म लगाउन पाउने
काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप आजदेखि दिन सुरु गरेको छ । पहिलो डोज खोप लगाएको मितिअनुसार खोप... ५६ मिनेट पहिले
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ का कारण अन्य रोगका बिरामीलाई सेवा प्रवाहमा लापर्वाही नगर्न अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएको छ... १ घण्टा पहिले
लमजुङ, कञ्चनपुर र धनकुटामा तीनजना मृत फेला
काठमाडौं । लमजुङ, कञ्चनपुर र धनकुटामा तीनजना मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । लमजुङको राइनास नगरपालिका–१०, लामागाउँस्थित लामागाउँ सामुदायिक जंगलमा दाङको... ३ घण्टा पहिले
प्रचण्डसँग किन भेट्न चाहँदैनन् विप्लव ? शक्ति सञ्चयको रणनीतिमै छन् !
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टी खुला राजनीतिमा आएसँगै पार्टीका आन्तरिक काममा व्यस्त छ । महासचिवसमेत रहेका विप्लव कपिलवस्तुमा... ४ घण्टा पहिले
सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा आजदेखि
काठमाडौं । काठमाडौंमा मनाइने सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा आजदेखि सुरु हुँदै छ । पहिलो दिन दरबारमार्गस्थित तीनधारा पाठशालाबाट रथ तानेर असन पुर्‍याइने... ५ घण्टा पहिले
चितवनको अयोध्यापुरीमा राखिने मूर्तिको बालुवाटारमा पूजा
काठमाडौं । चितवनको अयोध्यापुरीमा राखिने राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका मूर्तिलाई बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूजा गरेका छन् ।... ६ घण्टा पहिले